माडीमा फेरि बाघको आक्रमण, एक जना गम्भीर घाइते – Radio Prabhav 92.4 Mhz
२०७६ असार ११ चितवन । बाघको आक्रमणमा परी पूर्वी माडीको बगहीँ क्षेत्रमा एक जना गम्भीर घाइते भएका छन । आज दिउँसो करीब ३ बजे घरनजिकै पशु चौपाया चराउँदै गरेको अवस्थामा माडी नगरपालिका वडा नं. ९, गोबिन्दवस्ती जेठीबगहीँ निवासी बर्ष अन्दाजी ४० बर्षका इन्द्रबहादुर दुरालाई निगाले बाघले आक्रमण गरेको हो ।
चरिरहेको बाख्रालाई आक्रमण गर्न खोजेको सो बाघलाई ढुङ्गाले हानेपछि दुरालाई बाघले आक्रमण गरेको वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष कृष्णराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । हात र शरीरका अन्य भागहरुमा घाउ लागेका उहाँलाई कृष्णनगरस्थित अधिकारी मेडिकलमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि भरतपुर पठाइएको छ ।
करीब एक साता अघि समेत पशु चौपाया चराउँदै गरेको अवस्थामा माडीको सिमरा गाउँनजिकै दिउँसै बाघले एकजनालाई आक्रमण गरेको थियो, जसको उपचारको क्रममा निधन हुनपुगेको थियो । निकुञ्ज र यस आसपासको सामुदायिक वनहरुमा जंगली बाघको संख्या बढ्दै जाँदा पशु चौपाया र मान्छेलाई आक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
प्रहरीको ट्रकले रोकिराखेको बोलेरो गाडीलाई ठक्कर दियो, ७ प्रहरी घाइते